2 Guurguur Ankara Shilka Shilka Ankara RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKiiska Shilka ee Ankara YHT
kiiska daad-gureynta shilka ankara yht
Dhageysiga kiiska 2018 eedeysane oo la xiriira musiibada yarooyinka 'YHT' ee ka dhacay Ankara sanadkii 10, maxkamada waxay go aansatay inay sii wado xariga Osman Yildirim, qaban qaabiyaha tareenka Osman Yildirim, iyo maxbuuska Sinan Yavuz iyo kontoroolka taraafikada Emin Ercan Erbey.
YHT waxay ku hawlan tahay duullimaadyada Ankara-Konya, 13ka Diseembar 2018 Xarunta Yenimahalle ee degmada Marsland waxay isku dhaceen tareenka wadada si loo xakameeyo wadada. Sagaal qof ayaa naftooda ku waayey musiibada, 86 qof ayaa ku dhaawacmey.
Dacwad maxkamadeed ayaa laga gudbiyay Ankara 10-aad ee Maxkamadda Sare ee Dambiyada iyada oo lagu soo oogay dacwado ah olma oo sababay dhimashada iyo dhaawaca in ka badan hal qof hakkında 15 qof.
Maxkamadeynta 3 eedeysane, 7 ka mid ah la xiray halka 10 ka mid ahna ay weli socdaan, dhageysiga koowaad ee maxkamadda sare ee 30-ka. Qolka dhageysiga waxaa buuxiyay dadkii ku naf waayey iyo kuwa ku dhaawacmay agagaarka masiibada.
3 LA SAMEEYEY, 7 DAMBIYO LA XUKUN
maalin maalmahaBurcu Cansu'nun sida ay wararku sheegayaan; Sarkaal ka tirsan saldhigga tareenka eedeysaneyaasha Tren Detained Osman Yıldırım, sarkaalka dhaqdhaqaaqa Sinan Yavuz, maareeyaha taraafikada Emin Ercan Erbey iyo eedeysaneyaasha la xiray YHT Ankara Station Kuxigeenka Kuxigeenka Kadir Oğuz, Kuxigeenka Kuxigeenka Adeegga Gaadiidka Ergün Tuna, Maareeyaha Adeegga Gaadiidka Tnal Sayıner, Maareeyaha YakT Ankara Duran Yaman , Maamulaha Laanta Recep Kutlay, TCDD Gaadiidka iyo Waaxda Maareynta Saldhigga Mükerrem Aydoğdu, Madaxa Waaxda Amniga TCDD Amniga iyo Maareynta Tayada Erol Tuna Aşkın, ayaa hor timid garsooraha markii ugu horeysay.
BTS, SA HADDII SAXIIXA AY SAMEEYN KARIN ”
Bishii Marso 2016, Gülermak-Kolin Partnership iyo TCDD waxay saxiixeen heshiis loogu talagalay khadka Tareenka Sare. Sida ku xusan heshiiska, nidaamka u dhexeeya Ankara iyo Kayaş waxay ahayd in la dhammaystiro Janaayo 2018 iyo khadka Ankara-Sincan halka musiibo ka dhacday Oktoobar 2017.
Qandaraaskan ayaa la saxeexay 36 bilood, in kasta oo wakhtiga loo qabtay dhammaystirka mashruuca uu ahaa 17 bilood. Kahor doorashadii June 24, a'l the showgii siyaasadeed ee açılış ayaa la furay ka hor inta uusan nidaamka dhammeystirku dhameystirin.
In kasta oo digniinaha BTS ee casuumadaha musiibada aysan tixgelinaynin Dowladda AKP, masiibada waxay dhacday 13 Disembar 2018.
Musiibada ka dib, BTS ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay, önce Waxaan uga digay masuuliyiinta kahor intaadan furin khadkaan. Habka nidaamku calaamadku ushaqeeyo, maahan shil. Nidaamkan wuxuu xukumaa taraafikada jidadka tareenka. Calaamaddaan ayaa awood u leh inay ka hortagto xitaa haddii halkaan qalad ka jiro. Khadkan wuxuu furmay 12 Abriil kahor doorashada. Waxaan sameynay digniino waagaas oo waxaan dhahnay ma jiro wax calaamad ah
UM waxaan mooday inaan badalay khadka ”
Dacwada gudaheeda, sarkaalka saldhigga tareenka Osman Yildirim ayaa difaacay sababta eedaysanaha uu ku eedeeyay in shilku u dhacay sababta oo ah wuxuu iloobaa inuu beddelo maqaskii u oggolaaday in tareenadu galaan biraha kaladuwan marka loo eego jihada ay u baxayaan.
Yıldırım wuxuu yidhi, um Waxaan moodayay in aan sameeyay, laakiin ma aanan yeelin. Waxay ahayd shil maxaa yeelay tareenkii ku socday Line 2 wuxuu ka socday Line 1 ”.
Maaddaama nidaamka kuleylku uusan shaqeynin maqaska, Yıldırım wuxuu sheegay in maqasku uu barafoobay uuna u sheegay waxyaabaha soo socda maalinta munaasabadda:
Makas Garsooraha M74 ma shaqeyneyn weligeyna la i tusin. Maaddaama ay shaqaaluhu shaqeynayeen saacadaha dheeraadka ah, iyagu ma aysan shaqaaleysiin shaqaalaha wixii ka dambeeyay 23.00 si looga fogaado saacadaha dheeraadka ah. Ma ogeyn inaan ahay qofka keliya maalintaas. Markay ahayd 4-5-tii subaxnimo, Eryaman wuxuu kaheley digniino ku saabsan maqaska. Waxaan isku dayay inaan dhiso jidka 12-aad ee amarka sarkaalka howlgalka. Waxa uu lahaa baraf oo maqasku waa barafoobay. Doolow kuma jirin nidaam kuleyl ah. Caadi ahaan nidaam kuleylka ayaa ku jira maqaska laakiin ma shaqeynin. Waxa dhib igu noqotay samaynta maqas. Sarkaalku wuxuu sheegay inuu jiray tareen 13-kii. Waan la macaamilay waanan sameeyay. Markan waxaan u aaday inaan sameeyo maqashii 11-aad oo gambis soo dhacay.
Gacmahayga iyo cagahaygu barafoobay. Waxaan qabow ahaa ilaa 4-5. Malaha maan qufulin. Waxaan galay qolka. Waxaan sameeyay 11-ka maqas. Sameynta maqaska qaladka ayaa ah dhacdo caan ku ah wadada tareenka. Ma aysan ka taxadirin arrintan. Tareenka wuxuu iga gudbay hortayda laakiin suurta gal ma ahan inaan arko taas xitaa. Kadib shilkii ayaa dhacay aniga oo naxdin galay. Wali waan argagaxsanahay. ”
Yildirim, gudoomiyaha maxkamada "maqasyada ma qabatay" su'aal, "waxaan mooday inaanan haysan," ayuu ku jawaabay.
Hillaac, "cimiladu waa qabow, shaqadayda iyo tababarkeygu khaladka kama gelin," ayuu yidhi.
"TASKU WAA LAGA HELAY TABABAR"
Qareenka Cusmaan Yildirim Mehmet Eker wuxuu yidhi, Khadadka qaarkood waxay leeyihiin wax kabadan hal maqas oo dhamaantoodna waxay u baahan yihiin in la habeeyo. Maalintii dhacdada Hillaac waxaa loo xilsaaray qabanqaabada maqas dhawr ah. Macaamiishaygu wuxuu lahaa shan tababar oo kale oo uu qaadan lahaa, midkoodna kuma jirin
Kajawaabida su'aalaha qareenka Eker Yildirim,
“Qalabka buundada yar yar ma laheyn qalab nadiifin ah oo lagu nadiifiyo barafka. Guriga qolku ma ahayn meesha aan ka arki karo maqaska M74. Ma jirin calamado casaan, cagaar cagaaran oo loo istcimaalo digniinta buul hoyga ”.
MA AHA SAXIIXA SAXIIXA
Wast Ma jiray nidaam xakameyn ah oo maqashiika si sax ah loo beddelay? Ma jiraan wax calaamad ah? Shilka ma laga hor tagi lahaa hadii uu saxeexayo?
Hillaac, "Nidaamka digniinta elektiroonigga ma uusan dirin, in kastoo uusan shil ahayn," ayuu ku jawaabay.
"LOO BAAHAN YAHAY IN BADDALKII ISKU DIYAARIYO KU SAABSAN 5/10 daqiiqo"
Eedeysane Sinan Yavuz, sarkaalka mooshinka, wuxuu ku sheegay difaaceeda:
Im Waa waajibaadkeyga inaan wado tareen. Waxaan diray tababbarka hagaha ah waxa ugu horreeya maalinta shilka. Markaa waxaan dammaanad ka sugayey Cusmaan Yildirim. Muddo ka dib, Yildirim ayaa i soo wacay wuxuuna ii sheegay inaysan jirin cod quful ah oo ku saabsan maqasyada M90. Waxaan u sheegay inuu gaabiyo tareenka soo socda. Waxaan ugu yeeray Yildirim taleefonka farsamada inta uu tareenka soo galay. Waxay tiri wax dhib ah malahan maxaa yeelay maqasku wuu nadiifiyaa barafka.
Waxaa la sheegay in tareenka haga uu yimid Eryaman. M74 maqas kala soocaya xariiqa 1 iyo xariiqa 2. Ansixinta ayaa looga baahan yahay nidaamka. Waan raacay oggolaanshahaaga. Dhowr daqiiqo ka dib, ayaa loo yeedhay kantaroolka taraafikada. 06:30 Waxaan wacay darawalka waxaanan diray tareenka. Maaddaama aysan jirin nidaam digniineed, ma jirto hab lagu ogaado. Ma jirto hab aan ku baari karno, mana jirto si aan ku ogaan karno khadka ay ku socoto.
Celcelis ahaan, 60 tareeno ayaa maalin walba shaqeeya. Laga soo bilaabo Disembar 74 iyo wixii ka dambeeya, M9 wuxuu si joogto ah u beddelayay 5-10 daqiiqo iyadoo ku xiran xaaladda taraafikada. Khadadka 1 iyo 2 ayaa la furay muddo sagaal bilood ah. Waxaan awoodey in aan dhiibo maalintaas sida maalin walba. ”
Waan aqbalaa shuruudaha
Emin Ercan Erbay, oo ah la-taliyaha taraafikada ee la qabtay ayaa difaaciisa ku yidhi:
“Maalintii munaasabadda si caadi ah ayey u bilaabatay. Kama arki karo booska maqaska meesha aan fadhiyo. Waan aqbalayaa bayaanka sal ahaan. Waxaan sameeyay waxaan sameeyo maalin walba.
Nidaamka saxiixistu wuxuu ku dhammaanayaa Xinjiang. Ma haysto nidaam muujinaya jihada tareenka saaran dashboardka. Haddii ay ahaan lahayd, midkeen maanta ma joogi lahayn halkan.
Gudaha hoolka, falcelinta badanaa “dadku ma dhiman doonaan haddii saxiixista” kacaan.
SHAQAALAHA WUXUU KUU SAMEEynin laba Degmo
Agaasime kuxigeenka Xarunta Tareenka TCDD Kadir Oğuz wuxuu ku sheegay difaaciisa:
Waxaan Ankara ka shaqeynayay illaa 2006. Waxaan shaqeyn jiray inta u dhaxaysa 08:00 iyo 18:00 maalmaha shaqada. Waxaan gurigayga ku nasanayay maalintii shilka.
Qorsheynta shaqaalaha waxay tixgelineysaa cufnaanta tareenka 24 saacadood gudahood.
23: 00-07: 00 qof baa jira fiidkii habeenka. Marka la barbardhigo dhaqdhaqaaqa isu-duwaha, haddii ay jiraan hal qof iyo laba qof oo keliya, shaqaalaha meesha joogaa kuma filna. Suurtagal maaha in laba qof shaqada loo dhiibo toddobo shaqaale ah. ”
WAA INAANU DIYAARIYO DIIWAANKA DIIWAANKA
“Marka ay timaado tababarka, waxaa jira amar 5-maalmood ah oo la waafajinayo goobta shaqada cusub. Markii Cusmaan Yıldırım yimid, waxaan bari ka soconey wadooyinka socodka. Maalintii ugu horreysay ayuu u yimid inuu barto mabaadii'da socdaalka labada galbeed iyo bari. Uma barinno scissor 30 jir ah inuu isticmaalo maqas. Tababbarka is-dhexgalka ayaa la bixiyaa, halka lagu cuno, halka lagu nasto.
Diiwaangelin ama ma diidi, dukumiintiyada la sheegay in la habeyn doono, waxaan abaabulnaa dukumiintiyada tababarada garoonka dhexdiisa mar dambe.
Marka laga hadlayo tababbarka badhanka, aan idhaahdo kani kani ma ahan qalaf, laakiin fududeeye. Ma jiro wax dacwad ah oo maqasku aan la beddeli karin sababtoo ah badhanka ayaa la gelinayaa. Waxaa sidoo kale lagu sameyn karaa gacan.
9kii Diseembar, Cusmaan Yıldırım wuxuu haystay waardiyihiisii ​​ugu horreeyay ee habeennimo. Waxaa jiray sedex qof suuxdinta xigta, waxaa loo arkay inuu yaqaan sida loo isticmaalo qalabka maqaska. Wuxuu shaqada ku jiraa habeenka 12-ka. Ka gaabinta inuu saxeexo dukumiintiyada tababarka micnaheedu maaha inuusan garaneyn sida loo isticmaalo maqas.
Cusmaan Yildirim wuxuu sheegay in aqal sugitaanku uu qabow yahay oo aan xitaa albaab lahayn. Waa wax walba oo ku jira oo waa meel ku meelgaar ah. Wuxuu yidhi ma jirin calan, laakiin way jirtaa. Tareenadaani waxay leeyihiin daqiiqad daqiiqad ah xagga sare ee maqasku. Wuxuu galayaa ka dib markii calanka cagaaran la muujiyey. Waxaa la sheegay in aysan jirin wax dillaac ah xilliga qaboobaha. Maqasku wuxuu leeyahay dhammaan agabkii ay wax ka qaban lahaayeen. Waa run in aysan jirin nidaam kuleyl ah maqaska. Nadiifinta dooxooyinka qabow, ka dhigista inay shaqeeyaan ma aha dhibaatada saraakiisha saraakiisha tareenka. Isaga qudhiisa wuu yeelay. Wax khalad ah kuma lihin sameynta shilka. ”
MACHINE KU SAMEEYA
Darawallada ayaa tagaya dhanka midig ee wadada safarka oo saf badan. Waxaa lagu amrey inuu ku socdo Khadka 1aad. Sadarka 1 iyo xariiqda 2 waxay furan yihiin maalinta shilka. Sida ku xusan sharciga 1aad ayaa aadi lahaa. Ma aqaano sababta makaanikada aysan u weydiinin sababta ay uga baxday khadka 2.
Markii uu qareenka Osman Yildirim weydiiyay hadii ay jiraan tababaro badan oo la siinayo sida uu qabo sharciga, Kadir Oguz wuxuu yiri, “Tababaradaan lama bixin maxaa yeelay Cusmaan Yildirim waxaa la yimid tababar ku meel gaar ah. Tababaradaan waxaa bixiya shaqaale joogto ah ”.
ANIGU MA AHAN GUDBINTA QARSOONKA
Shear wuxuu muujinayaa jihada, marka laga hadlayo maqaska maqaska kaas oo farsama yaqaanku ku fiicnaan lahaa marka la eego fahamka sida si fiican loogu fahmi karo Oguz, kama aanan sameynin qoraal qoraal ah maqnaashaha la'aan, ”ayuu yidhi.
Maxkamaddu waxay la imaan doontaa SAXIIXdayda
Qareenada u doodaya Oğuz'a waxay ku doodayaan in shaqaaluhu dalbadeen, "Maxkamadu waxay weydiisay Ankara Gar'dan dukumintiga inuu la imaan doono saxiixaaga hadaad rabto?" Ayuu weydiyay. Oğuz, oo u shaqeeya kuxigeenka Maareeyaha Saldhiga Ankara, ayaa weydiiyay su'aasha: "Waxaa laga saaray galka aaladda. Waxay la timid qoraalkayga ..
XUQUUQDA Aasaaska ah waa in la xukumaa
Qareenada eedeysanayaasha, waxaa jiray doodo ku saabsan su'aalaha O directeduz. Sonrası Isaga waa maamulaha guud ee mas'uulka ka ah. Nidaamka lagu soo rogay, eedeysanehan ama qaar kamid ah eedeysanayaasha midkoodna ma xukumo. Waxaan rabnaa inaan xukumi mas'uuliyadda dhabta ah. ” Kadib sacabtii eedeysanayaasha eedeysanayaasha qolka maxkamadda, madaxweynaha maxkamadda ayaa yiri "kani maahan masrax filim".
GO'AANKA LAGU SAMEEYAY
Maxkamaddu waxay go’aansatay inay sii waddo xiritaanka sarkaalka hay'adda tareenka Osman Yildirim, sarkaalka maxkamad la xiray Sinan Yavuz iyo isuduwaha taraafikada Emin Ercan Erbey waxay goaansadeen inay baxaan.
Shilka Ankara YHT shilka go'aanka kiiska
Ankara-Konya YHT dedejinta